Umthandazo kuMntwana oyiNgcwele waseAtocha. ? Iindlela ezivulekileyo, uKhuselo kunye neMpilo.
Umthandazo kuMntwana oyiNgcwele ka-Atocha. Abo bethu abakholwayo ngokuthembekileyo nababesenza inkolo yobu Katolika, bakwenza kanye ebomini umthandazo kuMntwana oyiNgcwele ka-Atocha ngakumbi kumazwe afana neVenezuela, Spain, Colombia, Honduras, Philippines, United States naseMexico njengendawo yokugqibela apho kuhlonitshwa khona ngamandla kwaye apho inendawo ezithile apho kuhlonitshwa mihla le kwaye kufumana amawaka eendwendwe minyaka le.
Ngomnye weengcebiso zomntwana uYesu oye waziwa kakhulu ngenxa yemimangaliso emininzi eyaziwayo neyenziwayo ngaye.
1 Umthandazo kuMntwana oyiNgcwele ka-Atocha ngubani?
2 Umthandazo kuMntwana oyiNgcwele ka-Atocha ukuvula iindlela
3 Umthandazo kuMntwana oyiNgcwele ka-Atocha wokukhusela
4 Ummangaliso wokuthandazela impilo
5 Ngaba iSanto Niño de Atocha inamandla kakhulu?
Umthandazo kuMntwana oyiNgcwele ka-Atocha ngubani?
Isixeko saseAtocha sikhona eSpain kwaye kuyaziwa ukuba inkulungwane yeshumi elinesithathu yahlaselwa ngokupheleleyo ngamaSilamsi.
Bavalela bonke abo baqhelisela ukholo lobuKristu ngaphandle kokutya okanye isiselo njengendlela yokohlwaya ngokuqatha iinkolelo zabo.
Ngeli xesha kuphela abantwana abaneminyaka elishumi elinambini babevunyelwe ukondla amabanjwa kwaye kulapho umntwana oyiNgcwele ka-Atocha wabonakala khona.
Baqala ke amabanjwa yamkelwa owayefika kubo yonke imihla ngengobozi yokutya apho wonke umntu atya ahlutha.
Into emangazayo kukuba ukutya akuphelanga kwaye ibhasikithi ihlala inento yabo.
Inkwenkwana yayinxiba iimpahla ezilula njengezokuhambela kodwa ibona ummangaliso wokuphindaphindeka kwabakholwayo yokutya yayazi ukuba yayinguYesu yedwa umntwana owayeza kubondla.
Umthandazo kuMntwana oyiNgcwele ka-Atocha ukuvula iindlela
Unenceba nobubele u-Infante de Atocha, ndiza phambi kwakho ukuba ndikuxelele ukuba ndiyakuthanda kangakanani kwaye ndikudinga kanjani, ndifuna ukuba ujike amehlo akho onenceba kum kwaye ubone ukuphelelwa lithemba kunye nenkxwaleko endikhathazayo, ndenze yonke into ngaphakathi kokufikelela kwam kodwa okwam iingxaki zinzulu kwaye andifumananga sombululo, Wena ungummangaliso ungasuki kum: Ndicela ngamandla ukuba undithumelele uncedo lwakho, ndicela intuthuzelo engxamisekileyo noncedo Qhubeka nokufunda eyona Ngcwele neyingcwele yoMntwana ka-Atocha, umkhuseli wawo onke amadoda, kwabangaswelekiyo, nguThixo ophilisa izifo.
Unomntwana oyiNgcwele onamandla: Ndiyakubulisa, ndiyakuncoma ngale mini kwaye ndikunika le mithandazelelo: (Bawo abathathu ooTata, abathathu baka-Hail Marys kunye neeGlass ezintathu), ngokukhumbula umhla owabandakanyeka kuwo amsulwa amsulwa kunye noMama wakho othandekayo, ukusuka kwisixeko esingcwele iYerusalem ukuya eBhetelehem.
Ngokholo endinalo kuwe, mamela izicelo zam, ukuthembela endikubeka kuwe, ndinike oko ndikucela ngokuzithoba: (cela into ofuna ukuyifezekisa).
Mna, ndikuthanda ngaphezu kwezinto zonke, ndifuna ukukudumisa ngokungapheliyo, kunye neeKherubim neeSeraphim, ezihonjiswe ngobulumko obugqibeleleyo. Ndiyathemba, Oyena Mntwana uxabisekileyo ka-Atocha, impendulo eyonwabileyo kwisicelo sam.
Ndiyazi ukuba andizukukhathazeka ngawe, kwaye nokuba uyakundinika ukufa okuhle, ukuze ndikuphele ndiye eBhetelehem yozuko.
Nguye, unxibelelaniso lweemfihlakalo zonke kunye nokuba nobuqili ngeendlela ezinkulu zisinika umangaliso wokusibonisa iindlela ngawo onke amaxesha ukuze sihambe kuzo ngokuzithemba nakukhuseleko.
Ezo zidlulayo ezibonakala ziphosakele okanye zingenakwenzeka ukuwela, kuqinisekile ukuba ngoncedo loMntwana oNgcwele ka-Atocha ungadlula.
Umthandazo unokwenza iindlela zethu zivuleke kwinqanaba lezezimali, kwizifundo, nosapho okanye kwezo zicwangciso okanye iinjongo esinqwenela ukufezekisa.
Umthandazo kuMntwana oyiNgcwele ka-Atocha wokukhusela
Umntwana osisilumko onguYesu waseAtocha, umkhuseli jikelele wawo onke amadoda, ukhuseleko jikelele lwabangenalo uncedo, ugqirha waso nasiphi na isifo.
Oyena mntwana unamandla, ndiyakubulisa, ndiyakuncoma ngale mini ndikunikezela ezi zintathu zoo Bawo, Zukisa uMariya ngozuko, kwinkumbulo yohambo lwakho olwenziweyo, ubenemizimba emsulwa enyulu kakhulu kowona mama uthandekayo, ukusukela kula mzi ungcwele waseYerusalem de wafika Kwindawo yokuzalwa.
Kule nkumbulo ndiyenzayo ngalo mhla ndicela ukuba undinike into endiyicelayo ...
Endizibonakalisayo ezi zinto ndikuzo, ndiziphathe kunye nekwayara yeekerubhi kunye neeserafim, ezihonjiswe ngobulumko, ndiyathemba ke, mntwana ka-Atocha, ndikuthumele ngochulumanco kule nto ndiyicelayo, ndiyibanga, ndiqinisekile ukuba andiyi kuyishiya Intliziyo yakho ikhathazekile ngawe, kwaye ndiza kukufezekisa ukufa okuhle, ukuba ndikuphathe kunye nembono yozuko.
(Nantsi isicelo siyenziwa kwaye ooTata abathathu, abathathu baka-Hail Marys no-Luzuko bayathandazelwa)
Umkhuseli wabo bakholelwa kuye naphantsi kwazo nje iimeko.
Kanye kunye banceda kwaye bakhusela abantu oyibonileyo ivela okokuqala uza kuyenza nathi.
Usenokungabonakali ngohlobo lomntwana okanye ambone esondela ngokwasemzimbeni kodwa ummangaliso uya kuhlala usenziwa xa sicela ngokholo nangokuqiniseka ukuba uyasiva kwaye uza kubiza kwethu ukuba asincede.
Ummangaliso wokuthandazela impilo
Owu othandekayo kunye noMntwana oyiNtanda oMnandi weMpilo!, Mntwana wam oyintanda, intuthuzelo yam enkulu: ndiyeza ebusweni bakho ndinyanzelwe kukubandezeleka okubangelwa sisigulo sam, kwaye ndishukunyiswa kukuzithemba okukhulu ukubongoza uncedo lwakho lobuThixo.
Ndiyazi ukuba xa wawusemhlabeni wanovelwano kubo bonke abantu ababandezelekileyo, ngakumbi abo babekhathazwa ziintlungu.
Yenzelwe yena infinito Uthando obufanele ukuba ulunike, ubaphilisile kwizifo zabo kunye neentlungu zabo, kwaye imimangaliso yakho yayiyimbonakaliso ebonakalayo yokulunga kwakho, uthando olungapheliyo nenceba.
Ke ngoko, Mntwana othandekayo wezeMpilo!, Mntwana wam othandekayo, intuthuzelo yam enkulu, ndicela uzundinike amandla ayimfuneko okunyamezelana nentlungu, ukukhululeka kunye nentuthuzelo kwezona meko zinzima kwaye, ngaphezu kwako konke, ubabalo kakhulu okhethekileyo, ukubuyisela amandla am, amandla am, impilo yam, ukuba ilungele umphefumlo wam.
Ngalo ndiyakudumisa, enkosi kwaye ndikukhonze ebomini bam bonke.
Bopha amandla oku umthandazo ongummangaliso kwiSanto Niño de Atocha yezempilo.
Akukho bunzima apho uMntwana oNgcwele ka-Atocha engenzi banokunika uncedo lwakho olunamandla.
Khumbula ukuba sithetha ngeNkosi enye uYesu Krestu owasifelayo emnqamlezweni wobunzima kwaye waphinda wavuka ngomhla wesithathu, yona yona ivela kwizibhalo ezingcwele.
Akukho sigulo angazange wasifumana ngokwakhe kuba wathwala izifo zethu kwiimbambano, olo lukholo esinalo xa lo mthandazo ukucela ummangaliso kaThixo kwimpilo yethu.
Ngaba iSanto Niño de Atocha inamandla kakhulu?
Ibali likaYesu ukusukela ndafika esibelekweni sentombi enyulu uMariya yayingummangaliso kwaye inamandla.
Ukukholelwa ukuba la mandla sele elahlekile sisenzo sokungabi nalukholo oluhlala lufika kuthi njengemveliso yeedarha ezizityalo zisitshaba ezifanayo engqondweni yethu ukuze zisenze sithandabuze.
Nangona iminyaka emininzi ukufa kunye nokuvuka kukaYesu Krestu, siyakholelwa kumandla akhe angummangaliso.
Ukucelwa komntwana oyiNgcwele ka-Atocha luphawu lokuba amandla akhe makhulu kwaye usakhumbula nathi esikholwayo kuye. Masiqhubeke sikholwe kwaye sithandaze ngokholo kwaye uyakuhlala eqhubeka nokusinceda kwaye aphendule izicelo zethu ngothando olungapheliyo.
Ndiyathemba ukuba umthandile uMntwana oNgcwele ka-Atocha.
Ukuthandazelwa kukaMark oNgcwele ka-Leon oza
Umthandazo kwi-Helena engummangaliso